Local Group ဆိုသောအခေါ်ဝေါ်သည် အဒ်ဝင် ဟာဘဲလ်မှ သူ၏ The Realm of the Nebulae ဆိုသော စာအုပ်မှ အပိုင်း (၆) တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သူ ဖော်ပြထားသည်မှာ "နက်ဗျူလာများ၏ သေးငယ်သောအဖွဲ့များ" ဟုဖြစ်သည်။ အလင်းတောက်ပမှုအား လျော့နည်းစေကာ M31, Milky Way, M33, Large Magellanic Cloud, Small Magellanic Cloud, M32, NGC 205, NGC 6822, NGC 185, IC 1613 နှင့် NGC 147 ဟူ၍ အသီးသီး သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သူသည် IC 10 အားလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော Local Group အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် Local Group အဖွဲ့ဝင်များသည် ၁၂ မှ ၃၆ အထိ တိုးလာခဲ့သည်။
နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီ SBbc Sagittarius (centre) အဖွဲ့ထဲတွင် ဒုတိယအကြီးဆုံး ဂယ်လက်ဆီအဖြစ် ပြန်လည်သတ်မှတ်လိုက်သည်။
သေးငယ်သော မက်ဂျင်လစ်တိမ်တိုက် (SMC, NGC 292) SB(s)m pec Tucana နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီ၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Canis Major Dwarf Irr Canis Major နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီ၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Pisces Dwarf (LGS3) Irr မိန် နက္ခတာရာ ထရိုင်ဂူလယ် ဂယ်လက်ဆီ၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ?
ကြီးမားသော မက်ဂျစ်လစ်တိမ်တိုက် (LMC) Irr/SB(s)m ဒရကို နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီ၏ လေးခုမြောက်အကြီးဆုံး အရန်ဂယ်လက်ဆီ။
NGC 147 (DDO 3) dE5 pec ကယ်ဆီယိုပီးယား အင်ဒရိုမီဒါ ဂယ်လက်ဆီ၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
ပုံစံအတည်တကျမရှိသော Sagittarius ဂယ်လက်ဆီပုများ IB(s)m V Sagittarius Local Group အဖွဲ့ဝင်များထဲတွင် အလယ်အကျဆုံး။
NGC 6822 (ဘားနတ် ဂယ်လက်ဆီ) IB(s)m IV-V Sagittarius
Canes Venatici I နှင့် Canes Venatici II dSph Canes Venatici
NGC 185 dE3 pec ကယ်ဆီယိုပီးယား အင်ဒရိုမီဒါ ဂယ်လက်ဆီ၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Sculptor ဂယ်လက်ဆီပု (E351-G30) dE3 Sculptor နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Fornax ဂယ်လက်ဆီပု (E356-G04) dSph/E2 Fornax နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Antlia ဂယ်လက်ဆီပု dE3/dSph/Irr? Antlia
Leo I ဂယ်လက်ဆီပု (DDO 74) dE3 Leo နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Sextans ဂယ်လက်ဆီပု dE3 Sextans နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Sagittarius ဘဲဥပုံ ဂယ်လက်ဆီပု dSph/E7 Sagittarius နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Tucana ဂယ်လက်ဆီပု dE5 Tucana
ကယ်ဆီယိုပီးယား ဂယ်လက်ဆီပု (အင်ဒရိုမီဒါ ၇) dSph ကယ်ဆီယိုပီးယား အင်ဒရိုမီဒါ ဂယ်လက်ဆီ၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Boötes II dSph Boötes နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Boötes III dSph Boötes နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Coma Berenices dSph Coma Berenices နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Segue2dSph မဿိ နက္ခတာရာ နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Pisces II dSph မိန် နက္ခတာရာ နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Eridanus II dSph Eridanus နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Grus I dSph Grus နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Tucana II dSph Tucana နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Pictoris I dSph or Globular Cluster Pictor နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Indus I dSph or Globular Cluster Indus နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Eridanus III dSph or Globular Cluster Eridanus နဂါးငွေ့တန်း၏ အရန်ဂယ်လက်ဆီ
Aquarius ဂယ်လက်ဆီပု (DDO 210) Im V ကုံ နက္ခတာရာ
Palomar 12 Capricornusaglobular cluster formerly classified asadwarf spheroidal galaxy
အခြား သတိပြုမိဖွယ် အရာဝတ္ထုများ
The road map to the Universe။ Daily Mail။ 24 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Earth's new address: 'Solar System, Milky Way, Laniakea'။ Nature။ 24 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Local Group။ 2015-05-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Hubble၊ E.P. (1936)။ The realm of the nebulae (PDF)။ Mrs. Hepsa Ely Silliman memorial lectures, 25။ New Haven: Yale University Press။ ISBN 9780300025002။ OCLC 611263346။ 2012-09-29 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ (pp. 124–151)
"History of the Local Group" (May 2003). To be published in: "The Local Group as an Astrophysical Laboratory". Cambridge University Press. Bibcode: 2003astro.ph..5042V.
"Updated Information on the Local Group" (April 2000). The Publications of the Astronomical Society of the Pacific 112 (770): 529–536. doi:10.1086/316548. Bibcode: 2000PASP..112..529V.
Wakker, B. P. (2008). "Distances to Galactic High‐Velocity Clouds. I. Cohen Stream, Complex GCP, Cloud g1". The Astrophysical Journal 672 (1): 298–319. doi:10.1086/523845. Bibcode: 2008ApJ...672..298W.
Massive Gas Cloud Speeding Toward Collision With Milky Way။ 2008-06-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။